Dagaallada ka dhanka ah IS ee ka socday xadka Siiriya iyo Lubnaan oo hakad la geliyay - BBC News Somali
Dagaallada ka dhanka ah IS ee ka socday xadka Siiriya iyo Lubnaan oo hakad la geliyay
Image caption Ciidamada Lubnaan oo guulo ka sheegtay magaalada Ras Baalbek
Ciidamada dalka Lubnaan ayaa sheegaya inay heleen haraaga siddeed qof oo la rumeysan yahay inay ahaayeen saraakiishii ay afduubka u haysteen dagaal-yahannada kooxda Isku Magacawday Dowladda Islaamiga ah sanadkii 2014.
Waxay ku soo aadeysaa kaddib markii xabbad joojin looga dhawaaqay xadka ay wadaagaan Siiriya iyo Lubnaan, tan oo horseedday wada xaajoodyo ay ku jiraan wada hadallo laga yeeshay sagaal ciidamada Lubnaan ka tirsan oo la afduubtay.
Madaxa ammaanka dalka Lubnaan Maj Gen Abbas Ibrahim ayaa sheegay in tijaabo hidda-raaca DNA laga qaadi doono haraaga la helay.
Ibrahim ayaa intaa raaciyay in uu socdo baadi-goobka sagaal meyd.
Warbaahinta Siiriya ayaa sheegay Axaddii in heshiis lagu gaaray in xoogagga IS, oo ciidamada Lubnaan dhinac kala dagaallamaya, iyo kooxda Hezbollah oo la jira ciidamada Siiriyana dhan kale kala dagaallamaya loo riixo bariga Siiriya.
Image caption Sawirku waa dagaal yahannada Hezbollah oo ku sugan Jroud Arsal, oo u dhow xadka Siiriya iy Lubnaan
Ciidamada Lubnaan ayaa IS kula dagaallamayay meel u dhow Ras Baalbek, halka ciidamada Siiriya iyo Hezbollah ay weerar uga soo qaadeen galbeedka gobolka Qalamoun ee dalka Siiriya.
Ciidamada Lubnaan ayaa ku adkeysanayay inuusan iskaashi kala dhexeyn ururuka Hezbollah, oo Mareykanku uu u aqoonsan yahay ururu argagixiso. Nooc walba oo xiriir kooxdaasi lala yeesho ayaa siyaasad ahaan xasaasi ka ah Lubnaan, iyadoo wax u dhimmi karta maalgelinta milatari ee ay Mareykanka ka hesho.
Toddobaadkii hore, Lubnaan iyo Hezbollah ayaa midkoodba ku dhawaaqay inay xoogaa guulo ah ka gaareen dagaal yahannada IS, iyagoo isugu geeyay qayb yar oo ka mid ah buuraha Siiriya.